साहित्यिक पत्रकार संघको अध्यक्षमा दुवाल - साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघको अध्यक्षमा मोहन दुवाल निर्वाचित भएका छन् । कोभ्रेको बनेपामा शुक्रबार भएको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले दुवालको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । दुवाल ३८ वर्षदेखि प्रकाशित ‘जनमत’ साहित्यिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक हुन् ।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पाँच उपाध्यक्षमा वियोगी बुढाथोकी, रामप्रसाद पन्त, नवराज पुडासैनी, बालिका गिरी र गंगा सुवेदी छन् । महासचिव चेतनाथ धमला, उपमहासचिव नवराज रिजाल, दुई सचिवमा होमशंकर बास्तोला र लक्ष्मी भट्टराई तथा कोषाध्यक्षमा सूर्यप्रसाद लाकोजु छन् । सदस्यमा शैलेन्दुप्रकाश नेपाल, प्रकाश सिलवाल, यादव भट्टराई, गणेश राई, नवदीप श्रेष्ठ, गायत्रीकुमार चापागाईं, माधवप्रसाद पोखरेल, सुधीर घिमिरे, बालमुकुन्द कार्की, पुण्य घिमिरे, नानीमैया अधिकारी, जगत वाशिष्ठ र रामसुन्दर देउजा छन् ।
संघले १२ बुँदे ‘बनेपा घोषणापत्र–२०७८’ जारी गर्दै संविधानमा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ उल्लेख भएअनुसार राज्यले लोपोन्मुख मातृभाषाहरूको समेत संवर्द्धन गर्न पत्रपत्रिका प्रकाशनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको छ ।
साहित्यिक पत्रपत्रिकालाई छुट्टै मापदण्ड बनाई सञ्चार उपकरणसहितको सुविधा दिइनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफू मातहतका कार्यालयमा साहित्यिक पत्रिका र पत्रिका खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमा नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघको प्रतिनिधि हुनुपर्ने तथा भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला विषयका समाचारलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।
२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित संघले देशभरि प्रकाशित विभिन्न भाषाका साहित्यिक पत्रपत्रिकाको हित तथा प्रवर्द्धन कार्य गर्दै आएको छ । छ दशकदेखि प्रकाशित ‘रचना’ साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक रोचक घिमिरे र ५१ वर्ष प्रकाशित ‘अभिव्यक्ति’ साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक नगेन्द्रराज शर्माले संघको नेतृत्व गरेका थिए ।
प्रकाशित : मंसिर ३, २०७८ २१:५५
अरुको सहारामा फिल्म चलाउनुपर्छ भन्दा नराम्रो लाग्छ : अभिनेत्री खड्का
काठमाडौँ — कोभिड महामारीबीच हल खुल्दा नेपाली फिल्मले खासै प्रदर्शनको आँट गर्न सकेनन् । झन्डै २ वर्षपछि हल खुल्दा महामारीअघि प्रदर्शन रोकिएर बसेका फिल्मले पनि नयाँ मिति तोक्न सकेनन् ।
तर यसबीच प्रदर्शनमा आएको हिन्दी फिल्म 'सुर्यवंशी'ले नेपालमै करोडौं रकम कमायो । अभिनेता अक्षय कुमारले भारतमा मात्र होइन नेपालका हलमा दर्शकको घुइँचो फर्काइदिए ।
हल खोलेसँगै प्रदर्शनमा आएको 'डाँडाको वरपीपल'ले हलिउड फिल्मले पाएको दर्शक पनि बटुल्न सकेनन् । हिन्दी फिल्मले हलमा चहलपहल बढाइदिएपछि नेपाली फिल्मकर्मीले धमाधम फिल्मको प्रदर्शन तोक्न थाले । 'चपलीहाइट ३', 'म यस्तो गीत गाउँछु २', 'सम्हालिन्छ कहिले मन'ले हिन्दी फिल्म पर्खिएको देखियो । कतिले नेपाली फिल्मकर्मीलाई आफ्नो फिल्ममाथि नै विश्वास नभएको, नेपाली फिल्ममा दर्शक तान्ने क्षमता नभएको भन्दै आलोचना गरे ।
फिल्म प्रदर्शनका लागि नेपालीले हिन्दी फिल्मकै भर परेको सुन्दा कस्तो लाग्छ ? राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्कालाई प्रश्न सोध्दा उनले जवाफमा नराम्रो लाग्ने सुनाइन् ।
'बलिउड/हलिउड फिल्मसँग हाम्रो फिल्म जुध्दा हामीलाई खुसी लाग्दैन । तर फिल्म रिलिज गर्नलाई हामी बलिउड र हलिउड फिल्म कुर्नुपर्ने रहेछ भन्दा कलाकारका हिसाबले नराम्रो त लाग्छ । तर फिल्ममा ठूलो लगानी हुन्छ । लगानीकर्ताले त फिल्म प्रदर्शन गर्नु अगाडि २ चोटी सोच्छन् नि ! तर अरुको सहारामा फिल्म चलाउनुपर्छ भन्दा नराम्रो लाग्दो रहेछ,'उनले भनिन् ।
उनी अभिनित फिल्म 'चपलीहाइट ३' पुस २ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
प्रकाशित : मंसिर ३, २०७८ २१:४२